Chelsea Oo Dooneysa Inay Xili Hore Soo Afjarto Amaahda Saul Niguez
HomeWararka CiyaarahaChelsea oo dooneysa inay Xili Hore soo Afjarto Amaahda Saul Niguez
November 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Chelsea ayaa rajeyneysa inay Saul Niguez dib ugu celiso Atletico Madrid jiilaalka, sida lagu sheegay warbixin ugu danbeesay.
26-sano jirkaan ayaa ku dhibtooday inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa Stamford Bridge tan iyo 45-daqiiqo riyo uu ka horyimid Aston Villa intii lagu jiray kulankiisii ​​ugu horeysay ee Premier League.
Inkastoo uu nasiibkiisu liito tan iyo markii uu amaah ku yimid maalintii ugu dambeysay, warbixin dhowaan ayaa sheegtay in Blues aysan qorsheyneynin inay soo gaabiyaan amaahdiisa maadaama ay doonayaan inay soo saaraan wax wanaagsan ka dib fasaxyada caalamiga ah.
Si kastaba ha ahaatee, warbixin gaar ah oo ay heshay Marca ayaa sheegtay in Thomas Tuchel uusan ku darin Saul qorshihiisa fog, waxaana uu qorsheynayaa inuu dib ugu celiyo kooxdiisii ​​​​hore bisha Janaayo.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Atletico aysan awoodin inay aqbasho soo laabashada hore ee Saul, inkastoo ciyaaryahanka khadka dhexe uu si ku meel gaar ah uga baxay inay ka caawiso inay maalgeliyaan saxiixa Antoine Griezmann .
Saul ayaa kaliya shan jeer u saftay tartamada oo dhan Chelsea xilli ciyaareedkan, qandaraaskiisa Atletico ma dhacayo ilaa 2026.